Andres Iniesta oo ka warbixiyay sababta uu u taageeri jiray Real Madrid marka uu yaraa – Gool FM
Andres Iniesta oo ka warbixiyay sababta uu u taageeri jiray Real Madrid marka uu yaraa
Dajiye May 25, 2018
(Spain) 25 Maajo 2018. Ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Spain, Andres Iniesta, ayaa wuxuu ka warbixiyay sababta uu u taageri jiray Real Madrid marka uu yaraa, ka hor inta uusan u dhaqaaqin Barcelona.
Iniesta ayaa wareysi uu siiyay wargeyska “Mundo Deportivo” wuxuu ku sheegay in qeyb ka mid ah noloshiisa marka uu yaraa uu taageero u ahaa kooxda Real Madrid.
Andres Iniesta ayaa sheegay inuusan taageera u ahayn carruurnimadiisa kooxda Barcelona, sababa la xiriira in ay Blugarana guul ka gaartay kooxdiisii hore ee Albacete.
“Waxaan u ciyaari jiray kooxda Albacete, waxaan u nimid Barcelona hal maalin si aan ula ciyaarno, Barca waxay awooday kulankaas inay dhaliso 7 gool aad ayaan u carooday, waxaana sheegay in aysan macquul ahayn kooxdeyda in sidaas ay ku dhacdo”.
El Clásico: Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ku dagaalamaya saxiixa David Alaba
“Mohamed Salah hadii uu doonayo inuu la mid noqdo Ronaldo iyo Messi waa inuu kula guuleystaa Liverpool Champions League”